Ubafaka njani abaqhubi bakho beHP kwi-Ubuntu 18.04 | Ubunlog
Nangona kuya kunqabile ukusebenzisa iiprinta ze-2D ngokuskena, zininzi iindawo kunye namacandelo amaninzi apho kusafuneka ube nomshicileli olungileyo osebenza kunye nokushicilela amaxwebhu angenakho okanye angafanele ukuskenwa.
Olunye lweempawu ezaziwayo nezaziwayo zomshicileli yiHP okanye iHewlett-Packard. Aba bashicileli bajikeleze umhlaba kwaye ngumvelisi wevenkile ethengisa yonke into, ke ngokuqinisekileyo ungaphezulu komnye wenu Isidingo sokufaka iprinta ye-HP kwikhompyuter Ubuntu. Nantsi indlela yokwenza ku-Ubuntu 18.04.Okwangoku zimbini iindlela zokufaka iprinta ye-HP ku-Ubuntu. Omnye wabo ngu yenza ngabaqhubi abaqhelekileyo abaza kusebenzisa imisebenzi esisiseko yomshicileli we-HP, Olu fakelo lufezekiswa ngokuya Uqwalaselo -> Izixhobo -> Iiprinta kwaye kwiphaneli sicofa iqhosha «Yongeza iPrinta»; Oku kuyakuqala iwizard yoqwalaselo ukufaka umqhubi oqhelekileyo weprinta ye-HP esiyikhethayo. Kodwa i-HP isebenze neSoftware yasimahla iminyaka kwaye ikhutshiwe kudala umqhubi okhethekileyo weGnu / Linux kunye Ubuntu. Oku kwaziwa njenge-HPLIP.
Okokuqala kufuneka khuphela lo mqhubi. Nje ukuba siyikhuphele, sivula i-terminal kwifolda apho ikhoyo kwaye sibhala oku kulandelayo:
Oku kuya kuqala ukufakwa komshicileli we-HP kwinkqubo yethu yoBuntu. Ngexesha lofakelo liza kusibuza imibuzo ekufuneka siphendule ngo-Y kwimeko ka-Ewe okanye u-N kwimeko ka-N. iliso! Inani elilandela igama elithi hplip la Kuya kufuneka silungelelanise iphakheji esiyikhupheleyo kungenjalo ayizukusebenza.
Ngoku siza kuba neprinta yethu ye-HP efakwe ku-Ubuntu kwaye oko kuthetha ukuba singayisebenzisa ukuprinta amaxwebhu esiwahlelileyo okanye esidale noBuntu bethu.
Umendo opheleleyo kwinqaku: ubunlog » Ubuntu » Tutorials » Uyifaka njani iprinta yakho ye-HP kwi-Ubuntu 18.04
UFernando Roberto Fernandez sitsho
Le software ibandakanya ulwandiso oluluncedo kakhulu olubizwa ngokuba yi "HP TOOLBOX" ekunika ulwazi malunga namanqanaba e-inki kwiikhatriji. Kucetyiswa kakhulu.
Phendula uFernando Roberto Fernandez
Ukuthetha ngo-Ubuntu 18, unelishwa elingakanani lokuba akukho nguqulo yama-32-bit?
Ubuntu iqabane 18.04 ukuba unenguqulo engama-32
UJorge Garcia sitsho
Ukugqibelela, kunye nomqhubi oqhelekileyo umshicileli uyekile ukusebenza xa ndisiya ku-Ubuntu 16.04 ndaya ku-Ubuntu 18.04 kunye ne-hplip-3.19.1:
Phendula Jorge García
UEdgar williams sitsho
Ndinencwadana yokubhala eyi-hp kodwa andikwazi ukufaka i-Wi-Fi driver, inyani uguqulelo lwe-10 lusebenza ngo-18.4. Ngaba ukhona umntu onokundinceda?
Phendula uEdgar Williams
Xa ndichwetheza chmod + x hplip-3.18.04.run && ./hplip-3.18.04.run kwisiphelo indixelela ukuba ifayile ayikho:
marina @ marina-X550WAK: ~ / Ukhuphelo $ chmod + x hplip-3.18.04.run && ./hplip-3.18.04.run
chmod: 'hplip-3.18.04.run' ayinakufikeleleka: Ifayile okanye ulawulo alukho
marina @ marina-X550WAK: ~ / Ukhuphelo $
Molo u-Antonio, kuya kufuneka uhlengahlengise kwisicatshulwa, inguqulelo ye-hplip oyikhuphelileyo, ngoku ndiyikhuphele kwikhonkco, kwaye ingxelo engu-3.16.7
ULuis Gonzalez sitsho
Xa uyifaka njengoko isitsho, indibuza iphasiwedi enkulu, ndingena kweyam kwaye ayiyamkeli. Yintoni eyona nto iphambili leyo?
Phendula uLuis Gonzalez
UCarlos Luis Villalobos sitsho
Ndine-Ubuntu 18.04 kwaye ndikhuphele umqhubi we-hplip-3.16.7 kodwa undicela ukuba ndihambise Ubuntu 16.04.
Phendula uCarlos Luis Villalobos
UAndres Giraldo sitsho
Uff mkhulu. Undikhuphe endaweni exineneyo. Ukuza kuthi ga ngoku ndiqala kwiLinux kwaye bekungekho lula ukumisela ezinye izinto njengoko ndenzile kwiWindows.
Nangona kulisiko nje, umonde kunye namava kuGoogle kancinci ngento oyifunayo kwaye ngokwendlela osasaze ngayo, kwimeko yam ubuntu 20.04 Ndifumene i-hplip 3.20.5 ukumisela i-hp photosmart c4780 iphrinta.
Phendula uAndres Giraldo
Ikhonkco lokukhuphela umqhubi litshintshile, ngoku kunjalo https://sourceforge.net/projects/hplip/
Ndiyaphawula. Ndithenge umshicileli we-hp laser 107a kwaye ndakwazi ukuyifaka kwi-ubuntu 18.04 ngalo mqhubi ulandelayo "HP Laser Ns 1020, hpcups 3.19.6", kodwa hayi ngaphambi kokuhlaziya i-hplip, kwenzeka ntoni ngenguqulelo "3.19.6 ", Ukusuka kwi-hplip, unokufumana lo mqhubi uhambelana nomshicileli endimthengileyo. Umvelisi we-hp akanaye lo mqhubi we-linux, oku kuphathwa yi-hplip esebenza ngokudibeneyo nenkampani ye-HP.
Into ebalulekileyo eyenziwa yi-hp kukuthumela kwi-Hplip ukukhangela ingxelo kwaye ubone iiprinta ezongezwe kuhlobo ngalunye lwe-hplip ... ngokungathi yonke into ibingumlingo, njenge-linux ubuntu 19.10 ungayifumana le printa kwi-hplip yomatshini wakho. Oko kukuthi, ukuba uneenguqulelo ngaphambi ko-Ubuntu 19.10, kuya kufuneka ukhuphele ingxelo entsha ngesandla njengoko iqabane elingentla lifundisa.
Ndiyathemba ukuba iluncedo kulo mshicileli. Ndishiya ".baleka" apha ngezantsi.
Molo, ukukopa lo myalelo, ukutshintsha inani leephakheji yokuqhuba, njl.njl iyandixelela ukuba le fayile ayikho, ndinqwenela kakhulu kuba bendikhe ndanezi ntsuku. Ndine-HP laserjet Pro M15a kwaye ikhompyuter yam Ubuntu 16.04
Nceda ncedaeeee! Ndiyabulela kwangoko
Uyenza njani kwakhona i-Shutter Screenshot edit option in Ubuntu 18.04?